Kungakhathaliseki ukuba ukuhlambalaza kungabonakala njani kwindoda, abafazi basenokuba ngabasebenzi kwaye banengcali ngakumbi ekuqhubeni imoto. Oku kuboniswe olunye lwezifundo eziphakamileyo kakhulu eziqhathanisa nezakhono zokuqhuba zebhinqa nabesilisa.
Iingcali ziye zafunda izixhobo zecala malunga namashumi amawaka endlela kunye nezithuthi zothutho eYurophu, kwaye kwathiwa "abafazi baqhuba ngcono kunamadoda." Kuzo zonke iimeko, ingekho iipesenti ezingama-35 zeengozi ezibangelwa yiphoso yabasetyhini.
Abantu abaqhuba le sifundo, bakholelwa ukuba uhluke ngokugqithisileyo kumzekelo wabameli bexesha elingapheli kakhulu. Yaye yonke into yokuba abaqhubi abancinci besifazane baziphatha ngokugqithiseleyo endleleni ngaphandle kwexesha labo, abanye abaqhubi. Iipesenti ezingama-25 kuphela zengozi zendlela zenziwa ngamantombazana.
Ukongezelela koko, kubalulekile ukucacisa ukuba ezo zengozi apho abenzi bamabhinqa abangekho bobubi kangaka, kwaye ukulimala kwakulula kakhulu.
Akukho nto yokuthetha, yinyani. Apha ezitalatweni zaseKazakhstan, kwakhona, unokufumana i-hack ngendlela yintombazana - yinyaniso. Umgangatho omhle xa uhleli emva kwesondo seemoto, ubhekisela kwimoto kwaye uqhube ngokubanzi kunye nokunyamekela kunye nokulinda njengendlu yakho. Ukuba imoto ithengiswa ngumfazi, ngoko bayithenga ngokukhawuleza nangaphezulu ngokuzithandela. Ngoko ke, thina, kwabasetyhini, amadoda asafuna ukufunda.
Kodwa amadoda amaninzi kwaye axelele ukuba umatshini kunye nabasetyhini baneembono ezihambelana ngokupheleleyo, kwaye ziyaqondakala. Kutheni ufihla ukwesaba ukhuphiswano, i-chauvinism yamadoda ...
Kodwa xa izinto ezinjalo zivakalayo emlonyeni wesifazane - kuqondwa ngokupheleleyo! Kutheni abafazi bengakwazi ukuhamba ngokuhamba? Yintoni ewavimbayo? Iingoma!
Inkolelo yenombolo 1. Imoto inzima kakhulu!
Abafazi abathandekayo, imoto yinkqubela efanayo kunye nokuphumelela kwempucuko, njenge-oven microwave, umatshini wokuhlamba, ifowuni yeselula okanye ikhomputha. Ngoko kutheni ungasebenzisa nayiphi na indlela, kwaye uyayinqabela imoto?
Yaye yinyani, kuba akukho bani okhuselayo kwaye akayi kuhlambalaza ukuhlamba iimpahla kwimingxuma, sebenzisa i-mail yepigeon kunye neebhili. Awufuni ukuhamba ehleli emotweni efudumeleyo neleyo, ngelixa ubushushu, kubanda, kunye nokubanda ebomini kunye nokugubha kwiibhasi ezinabantu abaninzi kunye nee-trolleybuses? Kwenzeka kuphela ngenxa yexesha elithile, kwaye mhlawumbi kwakuyindoda yakho, yakuqhubela entloko ukuba imoto yinkalo yomntu kuphela.
Inkolelo yenombolo 2. Xa umfazi eqhuba imoto, ulahlekelwa ngumfazi wakhe.
Le ngqungquthela ayifuni ukukhankanya, kuba ngokukhawuleza kucacile ukuba oku kukukhohlisa kakhulu! Enyanisweni, nangona umfazi eqhuba imoto iminyaka elishumi, uhlala eselomfazi. Ngaphezu koko, uqhuba imoto ngendlela eyahlukileyo, njengowesifazane. Kwaye kufuneka kuqatshelwe ukuba, njengokungathi amadoda awazange athi, kuhle kakhulu ukuba ibhinqa linemoto ngendlela yakhe.
Inkolelo yenombolo yesithathu. Umfazi uqale waqulunqwa kangangokuthi akakwazi ukuqonda indlela yokuqhuba imoto.
Eneneni, le ngqungquthela yenziwa ngabantu abesaba kakhulu ukuba loo ntokazi, ingakumbi umfazi okanye intombazana, iya kuqhuba imoto engcono kunokuba yenzayo.Ewe, ngokwenene ukwesaba kwabo kulungile. kunokuba, umzekelo, abafana babo, amadoda okanye abahlobo. Phonsa izinto ezingaboniyo entlokweni yakho, kuba akukho nto inobungozi kubume besifazane, okuya kuthintela ukuba sihambe! Nangona kunjalo, kukho izinto ezininzi eziza kwenza ukuba kube ngcono kunamadoda!
Inkolelo yenombolo yesine. Ukuze ufunde ukusela, kufuneka uchithe iminyaka emininzi.
Mhlawumbi, le ngqungquthela yayisungulwe ngabasetyhini abafuna nje ityala okanye belibale ixesha lokuhamba esikolweni. Ngokwemvelo, ngamnye umfazi ngamnye ngumntu ngamnye, kwaye ke kutheni uqeqesho luthatha ixesha elithile. Nangona kunjalo, ngokuqhelekileyo, ukuba ufundiswa ngumfundisi olungileyo, emva kweenyanga ezimbalwa uza kuba ngumqhubi omhle kwaye uzive uqinisekile kwivili, kodwa kungekudala.
Kodwa nangona emva kokuba ufumane amalungelo kwaye uwedwa kunye nemoto, unokutshatyalaliswa kakhulu. Nangona kunjalo, akusikho ixesha elide kwaye wonke umntu uyadlula. Ukuba uya kusebenza rhoqo, umzekelo, uye emsebenzini, emva kwenyanga uza kuba neentembelo endleleni, kwaye xa isiqingatha sonyaka uya kukulibala ngokupheleleyo ukuba la ma knelo ayangqineka njani kwaye uqale ukuziva uvuyo xa uqhuba imoto.
Inkolelo yenombolo yesi-5. Indoda ngumfundisi obalaseleyo.
Ukuba ufuna ukufunda ngokwenene ukuqhuba imoto, ungaze uyivumele! Abaninzi abafazi bayangena kwaye benze loo mpazamo. Kufuneka ukhumbule ukuba umyeni wakho akaze akwazi ukukufundisa indlela yokuqhuba imoto. Nangona kunjalo, uya kuqhuba yonke into engunaphakade ukukuqhubela entlokweni ukuba awudingi ukuqhuba imoto, ukuba awukwazi nto malunga nayo, kwaye awunayo izandla ngaphandle kwayo ... Kutheni? Yonke into yokuba ufuna! Kwaye xa indoda ingavumi yona! UNadele umntu ufuna nje ukukubonisa kwaye akubonise ukuba imoto kunye nokuqhuba kwakhe kukuphela komntu. Kodwa kunjalo: musa ukuhlala emva kwesondo lesondo, xa kuhamba nomyeni wakhe ehleli, kuphela emva kokuba uzive ukhululekile endleleni, unokuhamba naye.
Inkolelo yenombolo 6. Ukufundisa imoto engcono kumfazi.
Le ngqungquthela! Ngokuqinisekileyo uya kufumana le ngcebiso engafanelekiyo: nokuba awuyiqondi into ehambayo, funda ukuqhuba kuphela kwimoto yakho. Indoda ayinakuze yamkele into yokuba uqhuba imoto, kwaye uya kuhlala ebala imoto yakhe, nangona ekugqibeleni uyinike yona!
Oku kuthetha ukuba ukuqhosha kwamadoda kunye ne-chauvinism kuya kwongezwa kwakhona. Emva kohambo lwakho ngalunye, umyeni uya kukhangela kwaye athathe kwi-car, phantse ngeglasi yokukhawulela iya kuhlola yonke i-scratch (av first time they will necessarily appear). Ngaphezu koko, amadoda, njengomthetho, enza ukuvakalisa ukunganeliseki nokuhlala bekhonkxa. Ukongezelela, amadoda ayayiqondi isizathu sokuba imoto ithathwe ngononophelo olungakumbi kunowesifazane, ukuba, ngokuqinisekileyo, sithetha ngemoto yakhe. Makheke nakwasekuqaleni!
Inkolelo yenani le-7. Andikwazi ukulungisa okanye ukulungisa imoto.
Abaninzi abasetyhini baya kuvuma ukuba iyona nto ibaluleke kakhulu kunye neyona nto ibaluleke kakhulu kwiintlobo zabo: "Ukuba ithe yawa phantsi?". Oko kukuthi, yintoni omele ukwenze, ukuba kukho into ehambelanayo kwisakhiwo esinjalo esiyingozi kwaye uqale ukusebenza ngokungafanelekanga? Enyanisweni, iingxaki ezinjalo zixazulula ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza.
Ukuze uhlale uzolile kuzo zonke ikhefu, akufuneki ukuba ufunde ukwazi ukuba umatshini ungaphantsi kwe-hood. Ngokuqinisekileyo ezinye iingxaki ezilula kunye nezisisiseko oza kuzikhumbuza ngaphandle komsebenzi wemisebenzi, awuyi kufuna i-intelligence engaphezulu. Kwiminyaka emininzi awukwazi ukukrazula kude nemoto, kuphela kuyo kwaye uya kuhamba, ukongeza, uya kuqonda ngokucacileyo kwaye uyazi ukuba, phi kwaye kutheni ubaleke, waqhekeza, wayeka ukusebenza kunye njalo. Nangona kunjalo, into ebaluleke kakhulu ayilona. Into ephambili ukufumana inkosi engumqeqeshi oza kuhlala enkonzweni yakho - uya kuyilungisa imoto engahlaziyiyo kwaye ngokukhawuleza.
Inkolelo yenani le-8. Umntu olesabekayo ngumhloli wendlela yomzila!
Kule meko, kusemandleni nje ukuba ungumfazi, oko kuthetha ukuba isondo esahlukileyo kunokuba igosa lepolisa lendlela. Ngoko ke, umqhubi wesibini unethemba elininzi kunye namathuba ukuba akayi kuhlawuliswa ngaphezu komntu. Banciphisa amehlo abo, bamomotheka okuncinci - konke okuphelile ngobuso obunobomi bomhloli ngegama elithi: "Musa ukuphinda uphule!".
Inkolelo yenani le-9. Uya kuqhutyelwa ngumqhubi womntu.
Awukwazi ukuthelekisa nayiphi na inkululeko umshini unika, xa ezandleni zakho isondo kunye neenyawo zeenyawo ze-monster yesinyithi. Ngokuqinisekileyo, kuya kuba ne-traffic jams, kuya kubakho iimoto ezihlala zingenangqiqo kunye neengxaki zendlela yokuhamba embi phambi kwakho, kodwa nangaloo ndlela yokuzithemba okungenamkhawulo kunye nenkululeko ehamba xa uhamba ngeendlela zobusuku, awukwazi ukuthelekisa nantoni na! Ungazixeleli oku. Uya kuyithanda!
Iingcebiso ezingathengi zokuthenga
Bonisa iibala ngokwabo
Kuchaneka njani ukujonga i-strings?
Yintoni enokunika umama woNyaka omtsha?
Iingcebiso ezifanelekileyo zokunyamekela izicathulo
Ungazilungisa njani kwihostela?
Isipho soNyaka omtsha ngophawu lwezodiac
Ubusika - ubuhle akusiyithintelo!
Ukuba ngokukhawuleza umfazi wakho ushiye
Ikhekhe le-banana yaseVenezuela
I-porti yepiliti kwi-multivariate
Indlela yokugcina ingqalelo kumntwana, ukuba usebenza?
Iwaffles ezona zihle kakhulu ezenziweyo
Feng Shui ngoLuthando neMali
I-teknoloji: zokupheka zokupheka izitya ezahlukeneyo
Ukupheka kweeCulinary, izitya ezivela kwi-eggplant
Izitya ezintathu ezinentliziyo ngokukhawuleza
Izibilini ngaphakathi kwendlu yethu